Kooxda tifaftirka ee Tilmaamaha Teknolojiyada - Nagu saabsan | Golaha Moobaylka
Golaha Moobaylka waa degel internet AB ah. Boggan waxaan kula macaamilnaa wadaag dhammaan macluumaadka ku saabsan adduunka tiknoolajiyada: laga bilaabo casharro tallaabo-tallaabo ah oo leh macluumaad casri ah, illaa falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan aalado faa'iido leh oo xiiso leh maalintaada ilaa maanta.
Kooxda tifaftirka moobiilka waxay ka kooban yihiin koox khubarada teknolojiyada guud. Waxay ku siin doonaan hagitaanno casri ah oo adag oo ku saabsan sida loo sameeyo habraacyada qaarkood kombiyuutarkaaga, iyo sidoo kale inay kaa caawiyaan inaad iibsato talobixin ku saabsan alaabada tiknoolajiyada kala duwan.
Dhammaantiin waannu kaaga tegeynaa inaad iyaga wax yar ka sii ogaatid. Ku soo dhowow Móvil Forum oo waad ku mahadsan tahay inaad na haysatid.
Emilio Garcia. Isku-duwaha Madal-wareejinta iyo SEO xirfadle ayaa diiradda saarey bixinta khibrada ugu wanaagsan ee isticmaale. Si tan loo sameeyo, wuxuu ku hareeraysan yahay koox qorayaal xirfadlayaal ah oo wax ka qori doona meelaha ay khibrad u leeyihiin.
Kumbuyuutarkaygii ugu horreeyay wuxuu ahaa Amstrad PCW, kumbuyuutar aan ku bilaabay inaan qaado tallaabooyinkeygii ugu horreeyay ee xagga xisaabinta. Muddo yar ka dib, 286 ayaa gacantayda soo gashay, oo aan fursad u helay inaan ku tijaabiyo DR-DOS (IBM) iyo MS-DOS (Microsoft) oo lagu daray noocyadii ugu horreeyay ee Windows ... Soojiidashada adduunka sayniska kombiyuutarka bilowgii 90-meeyadii, waxaan hagay xirfadayda barnaamijka. Anigu ma ihi qof u xidhan xulashooyinka kale, sidaa darteed waxaan u isticmaalaa labadaba Windows iyo macOS maalin kasta iyo marmar mararka qaarkood Linux distro. Nidaam kasta oo qalliin wuxuu leeyahay dhibco wanaagsan iyo dhibco xun. Midkoodna mid kale ugama fiicna. Isla sidaas ayaa ku dhacda taleefannada casriga ah, midkoodna Android ma wanaagsana, midkoodna iOS-na ma xuma. Way ka duwan yihiin tan iyo markii aan jeclahay labada nidaam ee hawlgalka, waxaan sidoo kale u isticmaalaa si joogto ah.
Blogger wuxuu jecelyahay tikniyoolajiyadaha cusub, diyaarna wuu u yahay inuu la wadaago aqoontayda isagoo qoraya casharro iyo falanqeyn si dadka kale ay u ogaadaan dhammaan astaamaha aaladaha kaladuwan ay leeyihiin. Suurtagal maaha in la qiyaaso sida ay noloshu ahayd internetka ka hor!
Tafatiraha waqtiga firaaqada. La qabsashada taleefannada casriga ah oo had iyo jeer ogaanaya habab cusub oo si wanaagsan loogu isticmaalo, barnaamijyo cusub ama ciyaaro si aan kula wadaagno.
Waxaan ku jiray xisaabinta illaa iyo markii aan dhashay. Waxaan ka mid ahay jiilkii ku soo koray Windows XP oo markii dambena ay noqotay inaan dhex maro Vista. Waxaan u isticmaalaa macOS maalin kasta waxaanan la socdaa Linux. Waxaan jecelahay inaan ku dhex wareego nooc kasta oo nidaam ah hadaanan igu waalanayn, waxaan ku qaadan lahaa Android jeebka bidix iyo iPhone midigta.
Xamaasad ku saabsan adduunka tiknoolajiyada ayaa lagu dabaqay goob kasta si loo fududeeyo maalinteenna maanta. Dhadhanka dhadhanka aaladaha elektaroonigga ah ayaa ii horseedaya inaan ka falanqeeyo dhinacyo kala duwan, si aan u ogaado oo aan u awoodi karo inaan ugu isticmaalo sida ugu fiican, sidaas darteedna wax ugu darsado noloshooda waxtarka leh inta suurtagal ah.
Qoraa iyo tifaftire ku takhasusay kombiyuutarada, aaladaha, aaladaha casriga ah, smartwatches, wearables, nidaamyada kala duwan ee hawlgalka, barnaamijyada iyo wax kasta oo la xidhiidha geek Waxaan ku dhiiraday adduunyada tiknoolajiyada tan iyo yaraanteydii, tan iyo markaas, ogaanshaha wax badan oo ku saabsan maalin kasta waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu farxadda badan.
Laga soo bilaabo yaraantii waxaan jeclaa tignoolajiyada, gaar ahaan waxa sida tooska ah ugu xidhan kombayutarada iyo Nidaamyadooda Operating System-ka. In ka badan 15 sano waxaan si waali ah ugu dhacay jacaylka GNU / Linux, iyo wax kasta oo la xiriira Software-ka Bilaashka ah iyo Isha Furan. Waxaas oo dhan iyo in ka badan, maalmahan, Anigoo ah Injineer Kumbuyuutar ah iyo xirfadle haysta shahaado caalami ah oo ku jira Linux Operating Systems, waxaan si xamaasad leh wax ugu qorayay dhowr sano hadda, tignoolajiyada kala duwan, kombuyuutarada iyo shabakadaha xisaabinta, iyo mowduucyo kale. Taas oo, aan maalin kasta kula wadaago, in badan oo aan ku barto maqaallo waxtar leh oo waxtar leh.
Almeriense, garyaqaanka, tifaftiraha, geek iyo guud ahaan jecel farsamada. Had iyo jeer safka hore marka laga hadlayo softiweerka iyo alaabada qalabka, tan iyo markii wax soo saarkayga PC-ga ee iigu horreeyay igu dhacay gacmahayga. Had iyo jeer falanqaynta, tijaabinta iyo ka aragtida aragtida muhiimka ah tiknoolajiyada ugu badan ee hadda jirta inay na siiso, labadaba heerka qalabka iyo barnaamijka. Waxaan isku dayaa inaan kuu sheego guulaha, laakiin aad ayaan uga helaa qaladaadka. Waxaan falanqeeyaa sheyga ama waxaan u sameeyaa casharro sidii inaan u muujinayo qoyskeyga. Waxaa laga heli karaa Twitter ahaan @ miguel_h91 iyo Instagram sida @ MH.Geek.
Waxaan u shaqeeyaa macalin ahaan koorsooyinka maamulka nidaamyada GNU/Linux si aan ugu diyaariyo shahaadooyinka rasmiga ah ee LPIC iyo Linux Foundation. Qoraaga The World of Bitman, encyclopedia ku saabsan microprocessors, iyo buugag kale oo tignoolajiyadeed. Waxaan si gaar ah u maamulaa mowduucyada ku saabsan nidaamyada hawlgalka iyo qaab-dhismeedka kumbuyuutarka. Taasna waxaa ku jira aaladaha mobilada, maadaama ay yihiin kombiyuutaro leh nidaamka hawlgalka Android.
Wariye madax-banaan oo ku takhasusay ciyaaraha iyo tignoolajiyada. Waxaan sidoo kale ku qoraa todoandroid.es iyo http://xn--superacin-d7a.es/
Taariikhyahan xirfad ahaan, jecel Tiknoolajiyadda Cusub, waxaan ku jiraa geedi socod isbeddel laakiin weli kama tago jacaylka aan u qabo aaladaha, Farsamooyinka Cusub iyo Software -ka Bilaashka ah. Sanadihii la soo dhaafay waxaan naftayda u hibeeyay inaan ku raaxeysto oo aan isku dayo inaan ku faafiyo ereyga Software Bilaash ah, waddo adag oo aan wali raaco ...
Ku wareejinta qalab kasta oo elektaroonig ah oo leh badhano badan ayaa ah hamidayda. Waxaan iibsaday taleefankeygii ugu horreeyay sanadkii 2007, laakiin kahor, iyo kadib, waxaan jeclahay inaan naftayda u huro si aan u tijaabiyo qalab kasta oo guriga soo gala. Intaas waxaa sii dheer, waxaan jecelahay inaan marwalba ila socdo qof si aan ugu raaxeysto waqtigayga firaaqada xitaa inbadan.